स्यानिटाइजर | Ratopati
स्यानिटाइजर : ९५ प्रतिशत भाइरस त मार्छ, जथाभावी प्रयोगले समस्या पनि पार्न सक्छ ! access_timeकात्तिक २७, २०७७
विश्व नै कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ । कोरोना महामारीकै कारण दिनप्रतिदिन विभिन्न समस्याहरु बढ्दै गइरहेका छन् । श्वासबाट र हावाबाट सर्ने एकप्रकारको शुक्ष्म भाइरसको असरलाई रोक्न विभिन्न उपायहरु अपनाइएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा भरपर्दो उपाय साबुनपानीले...
मानिसको छालामा कति लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ कोरोनाभाइरस ? access_timeअसोज २२, २०७७
नयाँ कोरोनाभाइरस मानिसको छालामा फ्लू भाइरसभन्दा पनि धेरै लामो समयसम्म बाँचिरहन सक्ने कुरा पत्ता लागेको छ । जापानमा गरिएको एक अध्ययनमा सो कुरा पत्ता लागेको हो । सार्स–कोभ–२ नाम गरिएको, अहिले महामारी फैलाइरहेको र कोभिड–१९...
मेथानल मिश्रित स्यानिटाइजर त प्रयोग गर्नुभएको छैन ? ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ access_timeभदौ २९, २०७७
काठमाडौं - धेरैजसो अवस्थामा हातबाटै भाइरस संक्रमण हुन्छ। आफू होस् या अरूमा। त्यही हातलाई संक्रमणरहित बनाउन घसिने स्यानिटाइजर गुणस्तरहीन (मेथानल मिश्रित) रहेछ भने के होला ? त्यसमाथि बच्चाको हातमा प¥यो भने ? यो जिज्ञासामा चिकित्सकहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ...
टचलेस स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर बजारमाः स्वचालित रुपमा हातलाई स्यानिटाइज गर्न सकिने access_timeसाउन १२, २०७७
काठमाडौं । विश्वभर कोरोनाभाइरसको महामारी र त्रास बढेसँगै मानिसहरु सुरक्षित हुने विभिन्न किसिमका तरिका र उपकरणहरुको खोजीमा रहेका छन् । यसमध्ये एक हो हातलाई सफा र सुरक्षित गर्ने ह्याण्ड स्यानिटाइजर । यहि विषयलाई ध्यानमा राखेर स्मार्ट आर्क प्रालिले नेपालमा कन्ट्या...
घरेलु मदिराबाट यसरी बनाउन सकिन्छ स्यानिटाइजर (भिडियो) access_timeचैत २, २०७६
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिरहँदा यसबाट जोगिनका लागि अपनाउनु पर्ने विभिन्न सावधानीमध्येको उपायमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले स्यानिटाइजरको प्रयोगलाई पनि राखेका छन् । तर, कोरोनभाइरसको महामारी फैलिएसँगै नेपालमा ...